Ny minisitry ny fizahantany any Sodana dia miditra amin'ny Birao fizahantany afrikanina
Home » Travel Associations News » Ny minisitry ny fizahantany any Sodana dia miditra amin'ny Birao fizahantany afrikanina
Ny birao fizahantany afrikanina dia faly manambara ny fanendrena ny Hon. Dr. Mohammed Abu Zeid Mustafa, minisitry ny fizahan-tany, fahagola ary ny fiainana dia ao amin'ny Sudan, amin'ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany (ATB) Izy dia hiasa ao amin'ny filankevitry ny minisitra mipetraka ary ireo tompon'andraikitra voatendry ho an'ny daholobe.
Mpikambana vaovao nanatevin-daharana ny fikambanana talohan'ny fandefasana malemy ATB izay hatao ny Alatsinainy 5 Novambra, amin'ny 1400 ora mandritra ny World Travel Market any London.
Mpitarika fizahan-tany 200 lehibe, ahitana minisitra avy amin'ny firenena afrikanina maro, ary koa Dr. Taleb Rifai, sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha, no kasaina hanatrika ny hetsika ao amin'ny WTM.
kitiho eto raha te hahalala bebe kokoa momba ny fivorian'ny Biraon'ny fizahantany afrikanina amin'ny 5 Novambra ary hisoratra anarana.
Dr. Mohammed Abu Zeid Mustafa dia minisitry ny fizahan-tany, ny fahagola ary ny fiainana an-javaboary nanomboka ny taona 2015. Ny tanjaky ny fizahan-tany any Sudan dia ahitana karazana kolontsaina, fomba amam-panao, fomban-drazana, tsangambato manan-tantara, fivavahana, faritra ary toetr'andro.
Ny mpitsidika dia nanintona an'i Khartoum noho ny tantarany, ary nanatri-maso sivilizasiôna maro nifandimby toa an'i Meroe sy Kouh i Sodana. Ny fahagolan'ireo sivilizasiona ireo dia mbola hita manerana ny firenena.
Ny fitiavana mandray vahiny nasehon'ilay Sodaney dia miankina amin'ny kolontsain'izy ireo: tsara fanahy sy sariaka ary mandray olona izy ireo amin'ny ankapobeny. Ny fizahantany dia afaka manatratra fitomboana ara-toekarena sy ara-tsosialy ary fampandrosoana any Sodana.
MOMBA NY SARY FITORIANA FITORIANA AFRIKA
Niorina tamin'ny taona 2018, ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany (ATB) dia fikambanana iray izay ankalazaina eran-tany noho ny fiasa ho mpanentana amin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany mankany sy amin'ny faritra afrikanina. Ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia ao anatin'ny Fiaraha-miasa iraisan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany (ICTP).
Ny Fikambanana dia manome mpisolo vava mifanaraka, fikarohana lalina ary hetsika vaovao ho an'ireo mpikambana ao aminy.
Amin'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ireo mpikambana tsy miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, ny ATB dia manatsara ny fitomboana maharitra, ny lanja ary ny kalitaon'ny dia sy fizahan-tany mankany, avy any Afrika sy afovoany. Ny Fikambanana dia manome ny fitarihana sy ny toro-hevitra amin'ny lafiny tsirairay sy iombonan'ny fikambanana mpikambana ao aminy. ATB dia manitatra haingana ny fahafaha-manao varotra, fifandraisana amin'ny daholobe, fampiasam-bola, marika, fampiroboroboana ary fametrahana tsena manokana.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Birao Afrikana fizahan-tany, kitiho eto. Midira ao amin'ny ATB, kitiho eto.
Ny marika Quality Inn dia manokatra trano fandraisam-bahiny 1,600 any Etazonia
Ny Delta's A220 vaovao dia mitondra singa misy traikefa amin'ny dia iraisam-pirenena mankany amin'ireo zotra anatiny